बलात्कारीको टाउको छिनाल्न माग गर्दै मेनुकाले विप्लवलाई लेखिन यस्तो मार्मिक पत्र ! — Imandarmedia.com
देशमा हत्याहिंसा र बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि नागरिकहरुले यो राज्यले न्याय दिन नसक्ने भन्दै कारबाहीको आशा नेपाल कम्युनिष्टपार्टीसँग गर्न थालेका छन्।
उनले लेखको पत्रकमा भनिएको छ- ‘प्रिय विप्लव कमरेड ! पर्साको निचुटामा आठ वर्षीया एक बालिकालाई तिन युवकले सामूहिक बलात्कार गरी उनलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छन् । यौटा गरिबले आफु खाई नखाई हुर्काएकी आफ्नी फुलजस्तै छोरीको जीवन चुडिदिने ३ जना बलात्कारीलाई तुरुन्तै मुला काटे झैँ काट्नु पर्यो त्यसको ……….(खाली ठाउँ आफै भरौ) !!! कि गर्दन छिनाल्देउ, कि ….. छिनाल्देउ !!!
(प्रिय मित्रजन, यी नाबालकको सरिरभरि चिथोरेको, टोकेको घाउ नै घाउ छ भने उनको गोप्य अंग (योनी) क्षतविक्षत छ- अत्यधिक रक्तश्राब तथा बान्ता भैरहेकोले उपचारको लागि हामी सबै एक हुनुपर्ने जरुरि छ )….. तपाइले खाई नखाई पशिना बगाएर हुर्काएकी छोरीलाई यस्तै भयो भने तपाई के गर्नु हुन्छ ? यसमा मेरो छोरीको दोष छैन – दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर छाती फुलाएर सडकमा उत्रिनु हुन्थ्यो कि घर भित्रै लुकेर वा लुकाएर बस्नु हुन्छ ?
(बहुचर्चित सलमान खान -दबंग कार्यक्रम क्यान्सिल गराउन सक्नेले यति जाबो त सजिलै सक्छन कि भनेर गुहार मागेको !!!)’